उद्धब बडालः जसले जनयुद्धमा आर्मीको महिनौँ यातना सहे तर निष्ठा छाडेनन् (भिडियो कुराकानी सहित) | KTM Khabar
२०७३ मंसिर २१ गते १७:१३ मा प्रकाशित
गरिव किसान तथा निमुखा आमजनताको सेवा गर्छु भन्ने प्रणका साथ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै लामो समय बिताएका कार्यकर्ता हुन उद्घव वडाल । बि सं २०२८ साल देखि निरन्तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएका बडाल तत्कालिन माओवादी युद्घ मै हुुँदा बि सं २०५६ सालमा माओवादी प्रवेश गरे । माओवादी आन्दोलनमा लागेकै कारण महिनौ आर्मीको कष्टरीमा यातना सहे तर पार्टी प्रतीको निष्ठा र लगाव कहिल्यै छाडेनन । उनै बडालसंग केटिएम खबर डट कमका लागि रबि भट्टराईले गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंशः
विशेष सम्वामा यहाँलाई स्वागत छ ।
तपाई माओवादीको कार्यकर्ता हो ?
हो । म तत्कालिन माओवादी र अहिले माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता हुँ । मैले सामान्य समर्थन २०५६ देखि र सांगठनिक रुपमा २०५७ देखि पुर्ण रुपमा माओवादीमा छु ।
युद्घ मै हुँदा तपाईको तत्कालिन माओवादी पार्टीमा प्रवेश भयो ?
हजुर त्यतिखेर माओवादी युद्घ मै थियो भनौ आन्दोलन चरम उत्कर्षमा थियो त्यसै बेला देखि म माओवादी आन्दोलनमा होमिए ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चाही कहिले देखि होमिनु भयो ?
म २०२८ सालबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको हुँ । मैले भारतको कलकत्तामा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएको हुँ । मैले हरिराम शर्मा बाट सदस्यता लिएको हुँ । उहाँलाई पुस्पलाल पछीको नेताको रुपमा मानिन्थ्यो ।
त्यतिखेर तपाई माओवादीमा प्रवेश गर्नु भयो, त्यतिखेर त राज्य र माओवादी विच युद्घको अबस्था थियो नि ?
मेरो कम्युनिष्ट आन्दोलनको लगाब चाहिँ फरक छ । म २०३० देखि २०४० सम्म बारा जिल्लामा बसे, त्यति खेर पनि म कम्युनिष्ट आन्दोलन मै थिए म नारायणी अञ्चलको सदस्य थिए । जुगेडिमा संघर्स भएको थियो । चितवनको जुटपानिमा संघर्ष भएको थियो । त्यसमा पनि मेरो भुमिका थियो र २०३६ मा जतिबेला राजाले जनमत संग्रहको घोषणा गरे त्यस पछी विभिन्न समयमा म पुलिस कष्टडिमा र १ महिना त्यति बेलै बिरगञ्जमा जेलमा पनि बसे ।
भनेपछी शोषित, उत्पिडित जनताको आवाज उठाएकै भरमा तपाई २०५६ अगाडि नै जेल बसिसक्नु भएको थियो ?
म जेल बसिसकेको थिए । म सम्पन्न परिवार मै जन्मिएको र समपन्नले बिपन्नलाई कसरी हेप्छन भन्ने बुझेको भएर नै म कम्युनिष्ठ आन्दोलनमा लागेको हु । अनि म ५६ सालमा माओवादिमा जतिबेला प्रवेस गरे त्यतिखेर पनि म २०५४ सालमा भएको स्थानिय निर्वाचनमा काठमाण्डौ महानगरपालिका वाड नं ७ बाट सदस्य जितेको अबस्था थियो र म त्यही अबस्था मै माओवादीमा प्रवेश गरेको हुँ ।
काठमाण्डौको मान्छे, नेकपा एमालेबाट वडामा पनि सदस्य जितेको किन होमिनु भयो नि माओवादिमा ?
म चाहिँ यहा उत्पिडन गर्ने सामन्तहरु अनि तिनीहरुको नाईके राजा अनि एमालेले पनि आफ्नु बिधान मै संम्वैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरेको अबस्था थियो र सामन्तवादको उन्मुलन नभएसम्म मुलुकको भाग्य र भविष्य बन्दैन भन्ने लागेर जुन रुपमा तत्कालिन माओवादिले युद्घ छेड्यो त्यसको समर्थनमा म लागेको हुँ ।
त्यति बेला माओवादीको लडाई चरम उत्कर्षमा थियो त्यो थाहापाउदा पाउदै पनि तपाई माओवादिमा लाग्नुभयो ?
मैले त्यो कुरा थाहा पाउदा पाउदै माओवादीमा प्रवेश गरेको हुँ । म मात्रै हैन मेरो छोरी पनि त्यति बेला सक्रिय रुपमा लागिन । छोरी म भन्दा बढी यातनामा बसिन् ।
तपाई माओवादी आन्दोनमा लागे कै कारण यातना पनि सहनु पर्यो ?
सहनु पर्यो । आर्मीको कस्टडिमा म बसेको हुँ चरम यातना सहेर बसे । घरवाट निस्कने वित्ति कै आखामा पट्टि लगाईयो त्यसपछी कहाँ लग्यो के गर्यो थाहा पाईएन ।
कति साल तिरको कुरा हो यो ?
यो ५९ साल तिर जति बेला माओवादी युद्घ उत्कर्षमा थियो । मलाई आखामा पट्टी लगाएर लगियो काहाँ लग्यो थाहा भएन । ५९ सालको बैसाखमा छोरीलाई लग्यो र मलाई भदाँैमा आर्मिले लग्यो । छोरीलाई सुरुमा पाटन लगेको रहेछ । त्यसपछी भैरवनाथ गण पुर्याएर ४५ दिन पछी छोरीलाई तारिकमा छोड्यो मलाई चाहीँ टोखा लगेको रहेछ । मैले ३ दिन पछी थाहा पाए । आखामा पट्टी थियो चरम यातना भोगियो, पशु सरह यातना दिईयो, सुँगुरको खोरमा राख्यो, चरम यातना पाईया,े करेन्ट लगाउने, मुखमा पानीको फोहोरा हान्ने यातनाको त सिमानै भएन मैले महिनौ यातना सहेको छु ।
त्यती धेरै योगदान रहेछ, तपाईको,पार्टी प्रति कुनै गुनासो छ ?
अब गुनासो छ भन्ने कि छैन भन्ने, कसैले केहि देला अनि केहि पाऊँला भनेर म पार्टिमा हिडेको हैन, केहि परिवर्तन भएकाछन् त्यसलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्छ पुर्ण रुपमा खुशि त छैन तर आंशिक परिवर्तन भएका छन् ।
योगदान गर्ने मान्छेहरुलाई पार्टीले स्पेश दिएन जस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो भन्दा पनि पार्टीमा कसको योगदान कत्ति छ, भन्ने कुराको मुल्याङ्कन नभएको हो भन्ने अनुभव हुन्छ । हामी तपाई युवाहरु जस्तो बुद्घि जिबि छैनौ होला तर पार्टीलाई यो ठाउमा उभ्याउन हाम्रो योगदान पनि त छ नि, यहाँ त पैसा कति कमाउने र पैसाको बलमा राजनिती गर्ने प्रबृति हाबी छ पार्टी भित्र यसको अन्त्य हुनपर्छ जस्तो लाग्छ ।
उद्धब बडालसंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तल क्लिक गर्नुहोसः